Kurongeka uye Dhirivhari
odha & kuendesa
Order & dhirivahari
Nezve bhanga rembeu
www.myweedseeds.com ine kudyidzana ne www.myweedseeds.com [www.myweedseeds.com] kweanoda kusvika makore gumi. www.myweedseeds.com ndeimwe yemabhangi ekutanga uye makuru embeu pa internet. Tave tichishanda kwemakore takabatana pamwe ne www.myweedseeds.com. Munguva yehupenyu hwedu takagamuchira huwandu hukuru hwemhinduro dzakanaka kubva kune vese vatengi vatsva uye vatengi vedu vese nezve zvigadzirwa kubva ku www.myweedseeds.com.
enda kune webhusaiti
isa mungoro yekutengera
sarudza nzira yekubhadhara uye zadza fomu reodha nenzira kwayo
Iyo sisitimu inokutumira iwe meseji kana mamiriro eodhi akachinja.
Zadza iyo chaiyo email-kero. Kana iwe ukasagashira email yekusimbisa kana chinzvimbo chinja email. Kana usati waigamuchira mubhokisi rako retsamba, ndapota tarisa spamfolder yako kutanga, usati waonana nebasa redu revatengi.
Kiredhiti Kadhi Haina Kubvumidzwa (vatengi veUS chete)
Kana iwe uri kubhadhara neVisa Debit kana Mastercard Dhibhiti uye yako odha haina kubvumidzwa iri nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Visa Mabhiza kana Mastercard Mabhangi anofanirwa kunge ari "International Debit" kuti ugone kutenga kunze kweUSA. Unogona kutenga izvi pane chero chitoro chinotengesa makadhi.
Kana, unogona kufonera Visa kana Mastercard uye bvunza "Ndokumbira ubvumire kutengeserana kwepamhepo kubva kuEurope". Sezvo izvi zvichizovharwa kudzamara vawana mvumo yako.
Makambani emakadhi echikwereti haazive zvauri kutenga sezvo achichengetwa ari ega asi ivo vanogona kuona yako odha yakamirira kusvikira iwe wabvumidza.
Isu ticharemekedza zvakavanzika zvako uye hatizombopa humbowo hwako kune chero wechitatu bato. Isu tinoshandisa izvi ruzivo chete kuti tikwanise kugadzirisa odha yako.
Kuendesa pasi rese
Isu tinotakura pasirese! Mbeu dzeMarijuana dzakanyatsotenderwa muNetherlands. Ivo havaonekwe pane runyorwa rweDutch Opium Act. Nepo mbeu yembanje pamwe zviri pamutemo muNetherlands, izvi ndizvo zvimwe zvinorambidzwa kune dzimwe nyika. Nekuti hazvigoneke kuti tiongorore mutemo wega wega wepasi pano, ndapota tarisa mitemo yako yemuno nezvekutambira mbanje / genetics munyika yaunogara. Tarira! Kana chigadzirwa chedu chakarambidzwa munyika yako funga kuti chigadzirwa chacho chinogona kutorwa nevakuru vemunharaunda uye hapazove nekudzoserwa.
Mirairo inotumirwa mukati me24hours. Mirairo inobvumidzwa pamberi pe14: 00hours CET [Central Europe Nguva] ichaendeswa zuva rimwe chetero. Isu tinotakura iwo mapasuru kuburikidza neDutch posvo kubva kuNetherlands. Iyo nguva yekuuya yeodha yako inogona kusiana kubva kwauri kuenda kuenda. Ivhareji odha inotora angangoita matatu kusvika kumazuva ebhizinesi gumi nemaviri kusvika muEurope. KuUS, Australia neAsia, izvi zvinogona kutora pakati pe3 kusvika kumazuva makumi maviri neshanu ebhizinesi.
Kuwanda kwemapakeji edu
Mapakeji ese embeu ane mbeu gumi nembanje dzeimwe mhando. Izvo hazvigoneke kusarudza musanganiswa wembeu dzakasiyana dzembanje.
Special zvipo zvichawedzerwa kune yako odha. Iwe uchagashira yakakosha kupihwa iyo inoshanda panguva iyo odha yakaitwa uye mushure mekubhadharwa kwekugashira. Zvipo zvakakosha zvinogona kusiyana.
Isu hatigamuchire mutoro wezvakakosha zvinopihwa uye mhando yezvigadzirwa izvi.